Paul Formosa, Maamulaha Guud ee Dekedda Bossaso: “Dekedda Bossaso Ganacsiga Waa u Furantahay” – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2017 3:26 g 0
Beryahaan waxaa Dekedda Bossaso ka soo baxayey warar iskhilaafsan oo marna sheegaya in dekeddu xirantahay, marna tilmaamaya in canshuurtii oo la siyaadiyey ay sababtay gadoodka ganacsatada. Illaa iyo hadda ma uu jirin war cad oo ka soo baxay maamulka shirkadda P&O Ports oo la wareegay maareynta iyo dib-u-dhiska Dekedda Bossaso.
Hadaba saacado kahor waxaa noo suurtooyday in aan si kooban ula xiriirno Paul Formosa oo ah Maareeyaha Guud ee Dekedda Bossaso iyo shirkadda Global Ports Services FZE oo ah shirkadda qaabilsan maamulka Dekedda Bossaso, una qaabilsan P&O Ports hawlaha maamulka iyo maareynta Dekedaha Soomaaliya.
Paul Formosa oo si kooban ula soo xiriiray Radio Daljir waxa uu nala qaybsaday oo uu yiri, “Dekedda Bossaso ganacsiga waa u furantahay, mana uu jirin maalin ay Dekeddu xirneyd.” Paul oo hadalka sii wata waxa uu yiri, “Macaamiisha Dekedda Bossaso ayaa diidan in ay doonyahoodu iyo maraakiibtoodu ku soo xirtaan dekedda.”
Mar aan weydiinay waxa ka jira wararka suuqa iyo in canshuurta la siyaadiyey, Paul waxa uu noogu jawaabay, “Waxaan halkaan farriin u diraya ganacsatada deegaanka iyo kuwa Bossaso, waxaana u sheegayaa in mar kasta uu albaabkaygu u furanyahay, ayna ii imaan karaan, anaana xaqiiqada la qaybsanaya, waxa la sheegayo ee waxba kamajiraanka ahna caadka uga qaadaya.”
Biloowga bishii Abril ee sannadkaan (6 Abril 2017) waxaa Dubai lagu saxiixay heshiis ay Shirkadda P&O Ports kula wareegayso Dekedda Bossaso. P&O Ports waxa ay si toos ah ula wareegtay DekeddaBossaso 12kii Oktoobar 2017, waxaana isla maalinkaas dekedda lagu qabtay xafladdii wareejinta.
Illaa iyo 13kii Oktoobar oo maamulka Dekedda Bossaso uu ka wareegay maamulka Puntland waxaa soo baxayey warar iskhilaafsan oo ku saabsan maamulka iyo maareynta Dekedda Bossaso. Hadaba Radio Daljir kala soco waraysiga masuuliyiinta Dekedda Bossaso iyo Global Ports Services FZE.